April 17, 2018 Aagan Post0Comments
बि.स.२०७५ बैशाख ४ गते । मंगलबार । आजको राशिफल यस प्रकारका छन् :-
आकस्मिक खर्च बढ्ने तथा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्या आउँने भए पनि दैनिक काम गर्न गाह्रो हुने छैन । साथीभाइ तथा आफन्त हरेको भेटघाटले नयाँ काम गर्ने अवसर आयपनि फाइदाको लागि अलि बढी मेहनेत गर्नुपर्नेछ । पढाई लेखाइमा अलि बढिनै समय दिनुपर्नेछ । माया प्रेममा मनमुटाव सिर्जना हुँनेछ । पति पत्नी बिच अविश्वास बढ्नेछ । कुनै नया काम को थालनी गर्दा सोच बिचार गर्नु होला ।
धन सम्पति जोड्ने योग रहेको छ । नयाँ कामहरू गरेर आम्दानीका स्रोतहरू बढाउँन सकिनेछ । विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउँने हुँदा राम्रा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ । सामाजिक संजालको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी भने जस्तो नाँफा कमाउँन सकिनेछ । विद्यामा राम्रो प्रगति हुँने हुँदा पढाई लेखाइमा मन जानेछ । सरकारी सम्पत्ति तथा पृत्रिक सम्पत्ति हात लागि हुँने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । माया प्रेममा धोका हुँनेछ दाजुभाइ वा अग्रजहरूको सुझाव तथा सल्लाह मानेर अगाडि बढ्दा सफलता पाउँन सकिनेछ ।
मन प्रसन्न हुँनेछ । नियमित काममा दाजुभाइ तथा आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । उत्पादित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैयाँ पैसा कमाउँन सकिनेछ । सानो प्रयत्नले राम्रो काम गरी फाइदा लिन सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुँनेछन् । छोटो, रमाइलो तथा उपलब्धिमुलक यात्रा हुँने अधिक सम्भावना रहेको छ । पराक्रम बढेर जाने हुँनाले जोसिलो काम गर्ने जाँगर आउँनेछ ।
शत्रु तथा प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुँनेछन् । बित्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपाइकै नाम अग्र स्थानमा आउँनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी भने जस्तो नाँफा कमाउँन सकिनेछ । भनेको समयमा सामाजिक कामहरू बन्ने हुँनाले छोटो समयमा नाम तथा दाम कमाउँन सकिने हुँदा घर परिवारमा खुसीयाली छाउँनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । साथीभाइ सँगको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बन्नेछ ।सरकारी सम्पत्ति तथा पृत्रिक सम्पत्ति हात लागि हुँने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ ।
← सेमि अनलाइन भनेको के हो ? कारोबार कसरी गर्ने ? (भिडियो सहित) जान्नुहोस
मन्जुश्री फ़ाइनान्सले कमायो ५ करोड ४६ लाख, हकप्रद भर्नु भयो ? →
April 16, 2018 Aagan Post 0